Maalitti jiru? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMaalitti jiru?
ABOn karaa nagaa biyya erga seenee booda shirootni garaa garaa irratti raawwatamaa turan. Kana keessaa tokko miseensotni WBO dhiigaa fi lafee isaanii qabsoo Oromoof sooraa turan akka diigamanii fi caasaa basaasa PP jalatti akka hammataman gochuu ture. Kun eessaa ka’ee akkamiin deemaa akla ture bal’aa waan taheef yeroo biraa itti deebina. Inni lammaffaa fi ijoon dubbii har’aa miseensotaa fi hooggantoota ABO diiguu, hidhuu fi ajjeesuu irratti kan fuulleffate bitamtoota ABO keessaa kaadhimmachuu ture. Kanas PPn Ibsaa Nagawoo fi Qajeelaa Mardaasaa ofitti maxxansitee akka ABO diiguu fi harka galfachuu dandeessu baajata guddaan eegalte. Cichoomina hooggansa ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoon guutuutti fashalaa’e.
Filannoo bara 2021 biyya namni nagaan bahee galuu dadhabee fi ajajni mana murtii hin kabajmne keessatti ABO fi KFOn filannoo keessatti akka hin hirmaatne ifoomsan. Oromiyaa keessatti bifa kanaan filannoon dharaa #FAKKEESSAA tahuun ifa tahe. Qophiin filannichaas fashalaa’e.
Obbo Qajeelaa Mardaasaa fi Ibsaa Nagawoo armaan dura PPf waadaa humna isaanii olii galan. Akka caasaa harkaa qabanii fi miseensota ABO HD irratti fincilsiisuun ABO dhuunfatan waadaa seenan. Sun biyyoo jalaa nyaate. Waan godhu gaafa dhabu Boordiin filannoo olola miidiyaalee mootummaa faallaatti HDn ABO Jaal Daawud Ibsaa qofatti akka beeku ibsuuf dirqame. Dabballoota PPf dhimmi kunii fi filannoo keessaa bahuun ABO fi KFO shororkaa itti uume.
Yeroo lammaffaaf jara maqaa KHR ABOn ibsa gaazexaa fi miidiyaa PPf kennaa oolan kanaan gowwoomaa jiru. Kora Sabaatu gaggeeffama waan taheef irratti hirmaattu; HDn irratti ni argamu jechuun Oromiyaa bakkee garaa garaatti sochii eegalan. Gaazexaa PP, Ethiopian Press Agency fi Miidiyaalee irrattis sababa rakkoo keessoo ABOn qophiin hin taasifamne waan taheef yeroon galmee kaadhimamtootaa akka achi butamu ajajuma PPn dubbatan. Oromoon ABO keessatti ilmaan isaa wareege.Qeerroon Bilisummaa Oromoo seeraa fi heera dhaabichaa tiksee jijjiirama siyaasaa qabatamaa fide. Qaamni faallaa kanaa deemu diina uummata Oromooti. Lafee fi dhiiga wareegamtoota keenyaa irra ejjechuu dha.
Gantummaan kanaa oliis hin jiru. PPn yeroo mara rakkoo keessoo ABO miidiyaa harkaa qabuun facaasaa ooluurra rakkoo keessoo ABO dhaabichumaaf dhiisuu qaba ture. Koreen Namuusaa fi To’annoo ibsa inni baasus akkasuma facaasuutu irra ture. Filannoon haqa qabeessi akka jiraatu barbaadnaan hidhamtoota siyaasaa hunda hiikee waajjiraalee ABO fi KFO hunda banuutu irra ture. Nama nagaa mana hidhaa keessaa baasee ajjeesisuu dhaabuu fi kan manni murtii bilisa jedhe gadhiisee dorgomuu danda’uutu irra ture. Shirri ammas itti fufe fafakkeessuuf yaadamu illee ammas hin fakkaanne.
Obbo Qajeelaa Mardaasaa,Ibsaa Nagawoo…;
Yeroo mara ibsa ajaja PPn kennitan irratti rakkoo keessoo ABO kaastu. Rakkoon keessoo ABO keessootti akka hiikamu osoo hin barbaadiin diina ilmaan Oromoo kumaatamaan hidhee dhaabicha diigaa jiru,waajjiraalee ABO fi KFO hunda cufee dhaabicha hooggansa malee hambisuuf gamu waliin hiriirtanii guyyuu miidiyaa isaanii irratti olola oofuu keessanii ol diinummaan hin jiru. Diinummaan kanaa oliis tahe gantummaan akka kanaa hin jiraatu. Ibsa kennaa ooltan irratti eegumsa, Wareegamaa fi tika Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhaabicha keessatti kaffales beekamtii dhorkattan. Kun injifannoo PPn butame keessaa qooda fudhachaa akka turtan ragaa cimaa dha.
Kanaaf, maqaa KHR ABOn ibsi kennaa ooltanii fi maqaa ABOn waadaan PPf galaa ooltan irraa akka of qusattan irra deebiin waamicha goona. Uummatni keenyas shira guddaa dhaaba hambaa wareegamtootaa,ABO irratti xiyyeeffatee halkanii fi guyyaa hojjetamu akka tikfattuu fi shira diinaa dura akka dhaabbattu waamicha taasisna.